Sistemụ 2-mpaghara - Delta Application Technics
Banye na otu "usoro sistemụ 2"
Enwere ike iji igwe ọ bụla na-ezipụ igwe nwere ngwa ngwa akpaaka
Ntinye ihe eji eme ihe ma obu oke viscous abuo abuo
DMC022 bụ sistemụ na-agwakọta na agwakọta maka ngwaahịa dị iche iche na-eji pasty ma ọ bụ elu viscous. Emere igwe a maka dosia, ikpochapu na itinye ngwa gi. Enwere ike hazie ngwa ahịa osisi sitxotropic na DMC2.
Pịa maka ozi ndị ọzọ.
Ngwa nke ngwaahịa ihe dị ala na viscous dị obere
A na-enyocha usoro DMC202 maka ịgbanye na ngwakọta nke ngwaahịa ngwaahịa dị ala dị ala dị ka epoxies, polyurethanes, silicones, wdg.
Enwere ike iji nwụnye maka akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ngwa akpaka ma nwee nhọrọ dị iche iche. Ọ bụ sistemụ sistemụ etolite dịka njirimara ngwaahịa a na mkpa gị.